MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ စေတနာမှန်ဖို့ တိုက်တွန်း
MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း
Let the Kachin Land be FREE .....
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ စေတနာမှန်ဖို့ တိုက်တွန်း
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကနေ အနည်းဆုံး အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူညီမှု ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ လေ့လာသူအဖြစ်တက်ရောက်မယ့် UNFC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကတော့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေးမှာ စေတနာမှန်မှန် သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ ဗွီအိုအေ ၀ိုင်းတော်သူ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ရေးတာဝန်နဲ့ရော၊ အရပ်ဘက် အဆင့်မြင့်တာဝန်တွေကိုပါ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ၀န်ကြီးဦးအုန်းမြင့်က ကချင်ပြည်နယ် လူထုရဲ့ဆန္ဒကို အလေးအနက်ထားပြီးတော့ ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဗွီအိုအေနဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံရာမှာ ခုလို ပြောဆိုပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာပဲ ဆွေးနွေးခဲ့လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ အခုတပတ် ပြန်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အထိကို သူတို့ကလည်း ပြည်သူတွေဘက်က ဆန္ဒခံယူခဲ့တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ကေအိုင်အို အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ တကယ့်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ တပ်တွေနဲ့ရော၊ သူတို့ သဘောထားတွေ တယောက်နဲ့တယောက် ညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ ကျနော်တို့ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် သတင်းရရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ မနက်ဖြန်မှာ ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာ ကျနော်တို့ အခုလာတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတာပေါ့လေ။ တချို့ဆွေးနွေးတာလေးတွေ လုပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ကျန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေလည်း ကျနော်တို့ မေးမြန်းစုံစမ်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ ကေအိုင်အို၊ ကေအိုင်အေ အဖွဲ့အစည်းတွေကရော၊ ကျနော်တို့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်က အဖွဲ့အစည်းတွေကရော ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်တဲ့ ကျနော်တို့အပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်းတွေကရော မျှော်လင့်ချက်ကတော့ အောင်မြင်မှုရရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားဖို့ အထိ ဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
"သို့သော်လည်းပဲ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေ၊ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေရယ်၊ သူတို့ပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေရယ်၊ ဒါတွေကိုတော့ ဆွေးနွေးပွဲကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့ တရင်းတနှီးနဲ့ အားလုံးကျနော်တို့ monitoring လုပ်မယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း UNFC ကနေပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဦးအောင်မင်းကနေပြီးတော့ အခွင့်အရေး ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်တဲ့သူကို ဖိတ်ပါ။ နောက်ပြီးတော့မှ ကြားဝင်ပြီးတော့ သူတို့ ဒီ စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ အဖွဲ့တွေ အနေနဲ့လည်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကလည်း special envoy နဲ့ သူတို့စီမံပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးမယ် ဆိုပြီးတော့ သိရပါတယ်။”
PCG လို့ခေါ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယွပ်ဇာခေါင် ကတော့ အမေးရှိပြီး အဖြေမရှိတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ မဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့အမြင်ကို ခုလို ပြောပြပါတယ်။
“နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ တယောက်နဲ့တယောက် အဖြစ်မှန်ကို ဆွေးနွေးမှုအပေါ်မှာ အမှန်တရား ဆုံးဖြတ်ဖို့ပေါ့။ အမှန်တရား မဆုံးဖြတ်ရင်တော့ ဒါကတော့ အဖြေကောင်းမထွက်ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ တခုက မေးခွန်းရှိပြီဆိုရင်တော့ အဖြေတော့ရှိတာပေါ့။ အခုက မေးခွန်းရှိပြီးတော့ အဖြေမရှိတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဆိုရင်တော့ ဘာလဲဆိုတော့ အဖြေမှန်ထွက်မလာပါဘူး။ ဒါကို စာမေးပွဲလိုပေါ့၊ မေးခွန်းမေးတာကတော့ အဖြေထွက်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ အခု ကျနော်တို့သုံးသပ်တာ ကတော့ မေးခွန်းတော့ရှိတယ်။ အဖြေမရှိတာ။”
မနက်ဖြန် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် ဦးဆောင်တဲ့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ လေ့လာသူအဖြစ် တက်ရောက်ဖို့ရှိတဲ့ ထိုင်းအခြေစိုက် UNFC ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် စောဒေးဗစ်တာကပေါ ကတော့ ကေအန်ယူ အထီးကျန်ဖြစ်ခဲ့သလို KIO မဖြစ်ရအောင် ၀န်းရံကြဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခုလို သုံးသပ်ပါတယ်။
“၁၉ နှစ်ကာလတုန်းက ကျနော်တို့ အထီးကျန်ဖြစ်ပြီးတော့ စစ်ရေးအရ ချေမှုန်းဖို့ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုလည်း ကျနော်တို့တွက်တာက KIO က အထီးကျန်ဖြစ်ပြီးတော့ စစ်ရေးအရ ချေမှုန်းမယ် တဘက်ကလုပ်တယ်ပေါ့။ အဲဒါ မသင့်တော်ဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒါကြောင့် ဒီမှာရနေရင် ဟိုမှာတိုက်၊ ဟိုမှာရနေရင် ဒီမှာတိုက် မဖြစ်ဖို့ပေါ့။ အဲဒါ အားလုံး စေတနာသန့်သန့်နဲ့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့၊ အစကတည်းက ကျနော်တို့ သဘောထားကြီးကြီးလုပ်ပါ တိုင်းရင်းသားနဲ့ပတ်သက်လာရင်။ အဲဒါကို ပြန်ပြီးတော့ ကြိုးစားရမှာပေါ့လေ။”
ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦး၊ ဦးစွန်လွတ်ဂံနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး၊ SSPP-SSA ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတပ်မတော်၊ RCSS-SSA ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တပ်မတော်နဲ့ UWSA ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ၊ NDAA မိုင်းလားအဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလည်း မနက်ဖြန် ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့တော့ ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ ဟာ ရွှေလီမြို့မှာ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေကြပြီးတော့ မနက်ဖြန် တရားဝင် ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ အိမ်ရှင် တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဝေါင်း လည်း တက်ရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
at 3/11/2013 01:54:00 PM
Comment များကို စီစစ်ပြီး တင်ပေးပါမည်။ မိုက်ရိုင်းသော၊ လူသားမဆန်သော Commet များ တင်မပေးပါ။
MYUTSAWMYIT စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း မှတ်တမ်း
MYUTSAWMYIT တိုင်းရင်းသားသတင်း မှတ်တမ်း
MYUTSAWMYIT ကချင်ပြည်နယ်သတင်း မှတ်တမ်း
ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃) ဒေသတွင် ဗမာစစ်သား (၃) ဦးကျ
(Jinghpawkasa) နိုဝင်ဘာ (၂၀) အင်္ဂါ ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် တပ် ရင်း (၃) မှ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ...
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap A 2013 Ning Hpyen Laisat Sara Wunkat Jawng Yu
(Kachinnet) Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap, Dai Lawn Rungamasing kata hpaw sharin ai Masat Yan (1/2013) ning hpyen laisat sa...
ကေအိုင်အေနှင့် မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ်၊ စစ်ဗိုလ် တဦး ကျဆုံး
(ဧရာဝတီ) အစိုးရ နှင့် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) တို့အကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး ဆွေးနွေး လျက်ရ...
စိတ်ပျက် စရာ ကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ သန်းခေါင်စာရင်း
(Kachin Duwa) ယူအန် က နေ မြန်မာ နိုင်ငံ ကုို နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ် ကျော် အထိ သန်းခေါင် စာရင်း အမှန်အကန် မရှိပဲ အုပ်ချုပ်နေ...
ကချင်ကို အပြတ်ချေမှုန်းရန် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမတ် လွှတ်တော်တွင် ပြော
(ဧရာဝတီ) ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) အား အပြုတ်တိုက် ချေမှုန်းနိုင် မှသာ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အာ ဏ...
တအာင်း အမျိုးသား တော်လှန်ရေး နေ့ နှင့်အတူ တိုက်ပွဲဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေ
(ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန) တော် လှန်ရေး နေ့ အခမ်း အနား ပြီး လုံခြုံရေး တာဝန် ယူ ထားသော တအာင်း လွတ်မြောက် ရေး တပ်မတော် (TNLA) တပ်ရင်း ( ၂၅၆ ) တပ...
(Jinghpawkasa) ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးခဲ့သော 1945 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ Atlantic Charter အမိန့်ပြန်တမ်းအရ အင်္ဂလိပ် အစိုးရသည် သူ့၏ ကိ...
မြန်မာပြည်က လူမျိုး ၁၃၅ အကြောင်း ဝေဖန်ခြင်း...
(Kachin Duwa) မြန်မာပြည် မှာ လူမျိုး ၁၃၅မျိုးရှိတယ် ဆိုပြီး စစ်အစိုးရ မီဒီယာတွေမှာ ခဏဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ ပြောပြောနေတာက လ...
ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့ ဘုရင်ကြီးဟေ့ (အပိုင်း ၁)
(Minmaha bagan fb page) တိုင်းမသိလျှင် ဗာရာဏသီ မင်းမသိ လျှင် ဗြမဒ္ဒတ ဆိုရိုးရှိ သလားပဲ ကျန်ာကတော့ တိုင်းပြည် ကိုတော့ မြန်မာပြည် ...
Miss International ပြိုင်ပွဲမှာ ဂုဏ်ရည်အေးကျော်က ကချင် ဝတ်စုံနဲ့ ဘာကြောင့် ယှဉ်ပြိုင်မှာလဲ
(Irrawaddy) Miss Myanmar International 2013 ဂုဏ်ရည်အေးကျော်က ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ လူမျိုးတွေ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသွေးအသား ထဲက တခု အပါအ၀...
Kachin News Group (English)
UN Official Visits Kachin IDP Camps
လီဆူလူမျိုးများပေါ် KIA/KIO ကျူးလွန်မှု တောင်းပန်ရန် ညှိနှိုင်းပေးရေး တောင်းဆိုခြင်း PCG ငြင်းပယ်
Gindai - EEDY News
The Kachin Net
Jingpo ( Kachin ) Manchuria Empire ကျဆုံးခြင်း၊ Manchuria မှ Manchu ဖြစ်ပုံလာပုံသမိုင်းကြောင်းနှင့်Manchu Empire ပျောက်ကွယ်သွားပုံသမိုင်း
N-GUN JA WA
Dai ning kani yi bai hkyen na PJS ndau
ကမ်ဘာ့စံနှုနျးတှနေဲ့မညီတဲ့ Facebook ရဲ့ လုပျဆောငျမှုက တရားမြှတတဲ့ရှေးကောကျပှဲဖွဈဖို့ စိုးရိမျနရေပွီလား
PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN
ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမှာ ဒို့မကြောက်ပါ
သမ္မတနှင့် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်မည်
တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ နဲ့ တရားစီရင်ရေး
Burma ( The Power of People)
ဘယ်သူမူးယစ်ဆေးဝါးပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာ့တပ်မတော် ပိုသိမယ် ….
့ အောင်စိုးမိုးကျော်(၂) ခရီးသည်တင် အမြန်ရေယာဉ်မတိမ်းမှောက်မှီ
မျှော်လင့်ရသော အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအထောက်အကူပြူ ကွန်ရက် ထုတ်ပြန်ချက် (၁)
Freedom News Group
အငြိမ်းစား စစ်ခေါင်းဆောင် ဟောင်း နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့နာရီ အတန်ကြာ တွေ့ ဆုံ
မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko
We Fight We Win. -- " More than Media "
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများအား အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုအပေါ် ကုလသမဂ္ဂ ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးထားသူများအမြန်ပြန်လွှတ်ပေးရန် နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရန်တောင်းဆို ။
Mahn served Karen 2014
အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဟံသာမြင့်က ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးပါရန် စာဖြင့်တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
The Facebook Times
ထူးအယ်လင်းကို သေတာတောင် ပြန်မပေါင်းဘူးလို့ မီးမီးခဲပြော
Ethnic Nationalities Voice
Aung Lynn Htut
The Myitsone Dam Project and Burma-China Relations
Min Ko Naing
Power of Fraternity
APK File Download
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့တွင် စတင်သည်။ သတင်းများပေးပို့လိုပါက kachinboy23@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သျှမ်း၊မြောက် တိုက်ပွဲတွင် UWSA ၊ SSPP/SSA နှင့် RCSS/SSA တို့ပါဝင်တိုက်ခိုက်မည်ကို ဦးခွန်ထွန်းဦး စိုးရိမ်
ကချင်နှင့် သျှမ်းပြည်ရှိ စစ်ပွဲများ ခြွင်းချက်မရှိရပ်စဲ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် သျှမ်းလူငယ် မောင်မယ်အဖွဲ့ (ရန်ကုန်)မှ တောင်းဆို
တပ်မတော် F-7 တိုက်လေယာဉ် စက်နှိုးစဉ် မီးလောင်
စိန်ခေါ်မှု အသစ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်
► November 27 - December4(20)
► November 20 - November 27 (28)
► August 21 - August 28 (5)
► July 17 - July 24 (6)
► May 29 - June5(4)
► March 27 - April3(4)
► December6- December 13 (1)
► November 29 - December6(2)
► November 22 - November 29 (14)
► October 25 - November 1 (4)
► October 18 - October 25 (9)
► September 27 - October4(5)
► September 13 - September 20 (3)
► July 19 - July 26 (17)
► May 17 - May 24 (3)
► May 10 - May 17 (3)
► May3- May 10 (12)
► April 26 - May3(8)
► March 22 - March 29 (11)
► March 15 - March 22 (11)
► March 8 - March 15 (6)
► March 1 - March 8 (6)
► February 22 - March 1 (43)
► February 15 - February 22 (85)
► February 8 - February 15 (53)
► February 1 - February 8 (25)
► January 25 - February 1 (4)
► January 18 - January 25 (78)
► January 11 - January 18 (32)
► January4- January 11 (18)
► 2014 (971)
► December 28 - January4(5)
► December 21 - December 28 (14)
► December 14 - December 21 (32)
► December7- December 14 (24)
► November 30 - December7(23)
► November 23 - November 30 (16)
► November 16 - November 23 (55)
► November9- November 16 (11)
► November2- November9(14)
► October 26 - November2(21)
► October 19 - October 26 (12)
► October 12 - October 19 (21)
► September 28 - October5(28)
► September 21 - September 28 (11)
► August 31 - September7(25)
► August 24 - August 31 (13)
► August 17 - August 24 (16)
► August 10 - August 17 (8)
► August3- August 10 (3)
► July 27 - August3(11)
► July 20 - July 27 (29)
► July 13 - July 20 (11)
► July6- July 13 (2)
► June 29 - July6(4)
► June 15 - June 22 (16)
► June 8 - June 15 (17)
► June 1 - June 8 (23)
► May 25 - June 1 (11)
► May 18 - May 25 (19)
► May 11 - May 18 (35)
► May4- May 11 (39)
► April 27 - May4(27)
► April 20 - April 27 (33)
► April 13 - April 20 (26)
► April6- April 13 (3)
► March 23 - March 30 (14)
► March 16 - March 23 (18)
► March9- March 16 (17)
► February 23 - March2(28)
► February 16 - February 23 (22)
► February9- February 16 (34)
► February2- February9(26)
► January 26 - February2(38)
► January 19 - January 26 (31)
► January 12 - January 19 (13)
► January5- January 12 (24)
▼ 2013 (2202)
► December 15 - December 22 (2)
► December 8 - December 15 (28)
► December 1 - December 8 (29)
► November 24 - December 1 (27)
► November 17 - November 24 (44)
► November 10 - November 17 (28)
► November3- November 10 (65)
► October 27 - November3(65)
► October 13 - October 20 (35)
► October6- October 13 (76)
► September 22 - September 29 (31)
► September 15 - September 22 (32)
► September 8 - September 15 (58)
► September 1 - September 8 (35)
► August 25 - September 1 (38)
► August 18 - August 25 (33)
► August 11 - August 18 (30)
► August4- August 11 (28)
► July 28 - August4(24)
► July 21 - July 28 (72)
► July 14 - July 21 (45)
► July7- July 14 (39)
► June 30 - July7(57)
► June 23 - June 30 (46)
► June 16 - June 23 (42)
► June9- June 16 (51)
► June2- June9(54)
► May 26 - June2(92)
► May 19 - May 26 (53)
► May 12 - May 19 (42)
► May5- May 12 (38)
► April 28 - May5(35)
► April 21 - April 28 (19)
► April 14 - April 21 (19)
► April7- April 14 (27)
► March 31 - April7(26)
► March 24 - March 31 (24)
► March 17 - March 24 (28)
▼ March 10 - March 17 (42)
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းဆင်း က...
Dingdung Sam Mung Ginra Ni Hta Matut Manoi Gasat P...
ကချင်ဒုက္ခသည်များ နိုင်ငံတကာ အကူအညီ မျှော်လင့်နေ
မြစ်ကြီးနား မိဘမဲ့ဂေယာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ကြန့်ကြာနေ
အစိုးရနှင့် KIO အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကု...
ကချင်ဒေသငြိမ်းချမ်းရေး ကုလအတွင်းရေးမှုးချုပ် မျှော်...
အစိုးရနှင့် KIO တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီး တိုက်ပွဲစ
မြင်းခြံငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူတွေ လိုင်ဇာဒုက...
ဧရာဝတီမြစ်ကိုဖျက်ဆီးနေသော စီမံကိန်းများရပ်ရန် တောင...
ဧရာဝတီနှင့် သံလွင်မြစ် ရေကာတာများ ရပ်တန့်ရေး လှုပ်ရ...
ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ရန် ပျက်ကွ...
UWSA ကို ဦးတည်လိုက်တဲ့ အစိုးရရဲ့ မဟာဗျူဟာ
အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သော KIO ကိုယ်စား လှယ်...
KIO နယ်မြေရှိ ကျောင်းများ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၀ တန်းေ...
နှစ်လ နီးပါး ကြာမှ အခက်အခဲ ကြားက ငြိမ်းချမ်းရေး လမ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ အတွေ့အကြုံ KIO ရှင်းလင်...
EU သံအဖွဲ့ မြစ်ကြီးနားရှိ ဒုက္ခသည်များနှင့် သာဘာရေး...
လိုင်ဇာမြို့မှာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်တဲ့ KIA ကိုယ်စားလ...
KIO နှင့် UNFC တို့ ရွှေလီမြို့၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ငြ...
KIO နယ်မြေရှိ ၁၀ တန်းကျောင်းသူ/သားများ အစိုးရ တက္ကသ...
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ရလာဒ်နှင့် စစ်ရေး ပြင်ဆင်မှုမျာ...
KIO နှင့် အစိုးရ အပစ်ရပ်ရေး သဘောမတူနိုင်သေး၊ တလအတွ...
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်တဖွဲ့ မြစ်ကြီးနားမှ ကြို...
KIA နှင့် အစိုးရတို့၏ သဘောတူညီချက် တိုးတက်ဖွယ်ရှိ
ခိုင်မာတဲ့ အပစ်ရပ်အတွက် အစိုးရနဲ့ KIA ဆက်ဆွေးနွေးသ...
ဗမာစစ်တပ်မှ ကေအိုင်အေ စခန်းများသို့ လက်နက်ကြီးများ...
နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၄၃) အနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
KIO/KIA နှင့် အစိုးရ တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲ ထုတ်ပြန်ြေ...
KIO နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွှေလီဆွေးနွေးပွဲ...
KIA နှင့် အစိုးရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေ
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ လဂျားယန်တွင် ပိတ်မ...
ဗန်းမော် ဒေသခံတွေ ဘာပြောကြသလဲ
KIO HTE MYEN SHWELI KAW BAWNGBAN NGA
Jarit Shawdaw Masat (43) Mayan Kaw Gasat Poi Byin ...
တပ်မတော်စစ်တပ်မှ ပြည်သူတစ်ဦးအား ဖားကန့်တရားရုံးတွင...
ဗမာစစ်တပ် ကားအစီး (၁၀၀) ခန့် ၀ါးရှောင်ဘက်ထွက်ခွာ
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ စေတနာမှန်ဖို့ တိုက်တွန်း...
KIO နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို့ ကိုယ်စားလှယ်တေ...
KIO နဲ့ အပစ်ရပ်နိုင်ဖို့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ မျှော်...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်သူများ လိုင်ဇာအနီး ...
ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်သူများ နဲ့ လိုင်ဇာနားကြေ...
► March3- March 10 (41)
► February 24 - March3(47)
► February 17 - February 24 (35)
► February 10 - February 17 (37)
► February3- February 10 (61)
► January 27 - February3(62)
► January 20 - January 27 (99)
► January 13 - January 20 (100)
► January6- January 13 (75)
► 2012 (788)
► December 30 - January6(86)
► December 23 - December 30 (66)
► December 16 - December 23 (55)
► December9- December 16 (38)
► December2- December9(34)
► November 25 - December2(18)
► November 11 - November 18 (35)
► October 28 - November4(26)
► October 21 - October 28 (29)
► October 14 - October 21 (41)
► October7- October 14 (30)
► September 30 - October7(35)
► September 23 - September 30 (54)
► September 16 - September 23 (36)
► September9- September 16 (37)
► September2- September9(40)
► August 26 - September2(45)
► August 19 - August 26 (33)
► August 12 - August 19 (18)
free visitor counter
Hla Oo's Blog
Myanmar Daily Star
သန်းရွှေမိသားစုThan Shwe and Family
သိန်းစိန်မိသားစု Thein Sein and Family
အောင်ထွေးမိသားစု Aung Htwe and Family
မောင်အေး မိသားစု Maung Aye and Family
မောင်ဘို မိသားစု Maung Bo and Family
ကျော်ဝင်းမိသားစု Kyaw Win and Family
ရဲမြင့်မိသားစု Ye Myint and Family
တင်အေးမိသားစု Tin Aye and Family
တင်အောင်မြင်ဦးမိသားစုTin Aung Myint Oo and Family
စိုးဝင်းမိသားစု Soe Win and Family
ခင်မောင်သန်းမိသားစု Khin Maung Than and family
အပြစ်မဲ့ ရွာသူရွာသားများ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းအား အစိုးရက အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသည့်အပေါ် ကန့်ကွက်ခြင်း
မတ်ခ်ျလနှင့် ဧပြီလအထိ ပလောင် ဒေသအတွင်းတွင် မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ်မှ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အခြေအနေ
“ဒုက္ခပင်လယ်ဝေခြင်း” မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်တွင် စစ်တွင်း ညှဉ်းပန်းမှုများနှင့် အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့စေခိုင်းခံရသဖြင့် အိုးအိမ်ယာမဲ့ဖြစ်ရခြင်းများ
MEMOIR: KACHIN PEACE EFFORTS (Photograph Album 1963-1994)
MYU TSAW MYIT. Watermark theme. Powered by Blogger.